DHIBAATO HOR LEH: Heshiiskii Nabil Fekir ee Liverpool oo burbur ku dhaw kadib markii uu maray tijaabada caafimaadka (Sideey wax u jiraan?) – Gool FM
DHIBAATO HOR LEH: Heshiiskii Nabil Fekir ee Liverpool oo burbur ku dhaw kadib markii uu maray tijaabada caafimaadka (Sideey wax u jiraan?)
(Liverpool) 09 Juunyo 2018 Taageerayaasha Liverpool oo aad ugu faraxsanaa in kooxdoodu ay dhamaystirto saxiixa Nabil Fekir ayaa haatan wajahaya madax xanuun cusub.
Wararka ka imaanaya Faransiiska iyo waliba ingiriiska ayaa sheegaya in Nabil Fekir uu maray tijaabada caafimaadka, waxaana labada kooxood ay isku afgarteen lacag dhan 53 milyan oo Ginni.
Liverpool ayaa la filayay inay ku dhawaaqdo saxiixa Nabil Fekir shalay oo jimco ahayd, laakiin wax walba si dhaqso ah ayeey isku badaleen.
Madaxwaynaha kooxda Lyon ayaa sheegay in Nabil Fekir uusan iib ahayn, Liverpool iyaduna dhankeeda wax war ah kama soo saarin arinkaas.
LiverpoolEcho ayaa daaha ka qaaday in baaritaankii uu maray laacibka lagu arkay dhibaato taas oo loo kala qaaday inay tahay mid la xiriirta taam ahaanshaha laacibka iyo mid kale oo ah dhaawac 3-sano ka hor ka gaaray jilibka.
Warbixintii shalay ka soo baxday kooxda Lyon ee lagu beeniyay in Nabil Fekir uu ku biirayo Liverpool ayaa ka caraysiisay kooxda tababare Klopp, waxaana suurogal ah in heshiiskii u dhexeeyay labada kooxood uu burburay.
idaacada RMC ee dalka France ayaa sheegtay in hadalkii ka soo baxay Lyon loo fasirtay inay doonayaan in lacagta Nabil Fekir ay u gasho sanad xisaabeedka cusub iyo inay ilaaliso sharciga suuqa kala iibsiga France oo si rasmi ah u furmay maanta oo sabti ah maadaama ay iska ilaalinayso kooxdu inay wax heshiis ah ku dhawaaqdo ka hor waqtigaas.
Wargayska L’Equipe ayaa isna dhankiisa daabacay in Nabil Fekir uu si buuxda uga gudbay tijaabada caafimaadka, balse labada kooxood ayaa wali isku haayaa lacagta laacibka oo aan wali si buuxda looga heshiin.
Cristiano Ronaldo oo u furan fikrada ah inuu u dhaqaaqo kooxda Juventus